Fiangonana narodana hiarovana amin’ny afo ireo trano 4 sisa mijoro tao an-tanàna [Ambohitranala, MD] – i am a malagasy in genève
1 novembre 2006 13 juin 2007
Fiangonana narodana hiarovana amin’ny afo ireo trano 4 sisa mijoro tao an-tanàna [Ambohitranala, MD]
Nahazoana fanampim-baovao avy any amin’ny fokontany Ambohitranala, Kaominina Androrangavola, Distrika Marolambo [MD] izay kilan’ny afo tanteraka tamin’ny Alarobia 18 Oktobra 2006 lasa teo [452 tafo potika, Malagasy 1998 1993 tsy manankialofana].
Voalohany aloha dia tsy misy aina nafoy. Manarak’izany, fantatra izao fa mpivahiny mandalo ny tanànan’Ambohitranala no nahandro sy nanadino tsy namono tsara ny afony. Fotoam-pambolena anefa izao ka dia tany an-tsaha avokoa ny ankamaroan’ny vatan-dehilahy raha nanomboka nitatra ny afo.
Ny olona tao an-tanàna vitsy, ireo fitaovana tsy ampy, tara ny fiadiana tamin’ny afo izay nivadika haingana ho hain-trano ary dia izao nitatra eran’ny tanàna izao.
Nony tafaverina tao an-tanàna ireo vatan-dehilahy tany an-tsaha dia voatery narodana ny trano fiangonana FLM, mba hamonjena ireo trano 4 hany sisa mijoro.
Amin’ny ho avy, ny mponina ao Ambohitranala dia nandray fepetra mba hisian’ny mpiambina hatrany, izany hoe tsy maintsy misy vatan-dehilahy mijanona ao an-tanàna.
Farany, raha vao nandre ny tatitra voina ny MAF [Mission Aviation Fellowship ao Madagasikara] dia lasa nisidina amim-piaramanidina nitazana ny tanàna [27 Oktobra 20006] sy nanombatombana izay mety ho ilaina . Efa misy vola kely avy amin’ireo ONG sy ireo Mission [misahana fitoriana ny filazantsara any Madagasikara] miara-miasa azo natolotra sy napetraka any an-toerana ho vonjy rano-vaky. Tsy mbola misy hetsika heno kosa avy amin’ny fitondram-panjakana. Roa herinandro aty aoriana dia tsy mbola mivoaka amin’ny filazam-baovao [radio, gazety, tv] ihany ity voina ity.
tatitra voina voalohany >>
Posté dans fanohananapar tomavana3 commentaires
3 réflexions sur “Fiangonana narodana hiarovana amin’ny afo ireo trano 4 sisa mijoro tao an-tanàna [Ambohitranala, MD]”
1 novembre 2006 à 08:04
Manam-baovao ksa ianao an!
1 novembre 2006 à 09:57
Misaotra amin’ny tsidika ry jentilisa a! Mason-tsokina ihany ny antsika e, ka izay kely ananana no ahiratra.
← 06|11|03 – Fanosorana Mpitandrina [Lausanne, CH]
06|11|05 – Antsam-panahy [Genève, CH] →